Iindaba -Uwukhetha njani umatshini omnye wokuthambisa?
Iimveliso zeplastikhi zidlala indima ebalulekileyo kwimimandla eyahlukeneyo yemveliso yezolimo kunye nobomi kunye neepropathi zazo ezigqwesileyo ezifana nobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, ukumelana nokubola, kunye nokusebenza ngokulula. Nangona kunjalo, ngokusetyenziswa ngokubanzi kweemveliso zeplastiki, ukulahlwa kweeplastikhi kwenkunkuma kuye kwaba yingxaki enzima, phakathi kwayo apho "kunzima ukuthoba ngokwendalo" kuye kwaba yingxaki engapheliyo efuna ukusonjululwa ngokukhawuleza kungcoliseko lokusingqongileyo lwehlabathi.
Kwiminyaka yakutshanje, kunye nophuhliso olukhawulezayo kushishino zeplastiki kwilizwe lam, ishishini granulator yeplastiki nayo iphuhliswe ngokukhawuleza. I-granulator ingenza iimveliso zeplastiki eziphinda zenziwe kwakhona kwiipellets zeplastiki ngokusebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo ukufezekisa umphumo weplastiki. Umzi mveliso wegranulator ubandakanya iindawo ezininzi kuqoqosho lwesizwe. Ayisiyo kuphela ikhonkco eliyimfuneko kwimveliso esisiseko yenani elikhulu leemveliso zorhwebo nezolimo, kodwa ikwadlala indima ebalulekileyo ekusombululeni ungcoliseko lweplastikhi yelizwe lam, yonyusa inqanaba lokurisayikilisha kweemveliso zeplastiki, kunye nokuseka inkqubo yokurisayikilisha egqibeleleyo. .
Kwiinkampani zeplastikhi ezenziwe ngokutsha, indlela yokukhetha i-pelletizer efanelekileyo ekusebenziseni kwayo ibaluleke kakhulu, kuba iplastiki yesiplastiki ayinako ukuvelisa zonke iiplastikhi ngenxa yeeplastiki ezahlukeneyo kunye noxinzelelo lwe-extrusion. Ii-granulators ngokubanzi zinokuphinda zisetyenziswe kwaye zenziwe ngeplastikhi yeplastikhi kubomi bemihla ngemihla, kodwa njengezinye iiplastiki ezizodwa, ezinje ngeplastikhi zobunjineli, i-polyethylene enqamleze umnqamlezo, ilaphu elisontiweyo, njl.njl. Ke ngoko, abavelisi kufuneka banikele ingqalelo kwiindidi zeeplastikhi abafuna ukuzisebenzisa kwakhona xa bethenga i-pelletizer, emva koko bakhethe i-pelletizer efanelekileyo.
Ukongeza, xa uthenga i-granulator, kuya kufuneka unike ingqalelo kwezi ndawo zilandelayo:
Cacisa injongo kunye nenjongo yokuthenga i-granulator. Okwangoku, kukho iindidi ezintathu zabathengi abathenga ii-granulators kwimarike. Batyale imali kwaye baqala ziinkampani ezizodwa okanye zabucala. Abavelisi beplastiki bathenga ii-granulators ukusombulula ingxaki eseleyo kwimizi-mveliso yabo. Kukho ke abasasazi kunye namashishini orhwebo. Kubathengi abaqala amashishini abo okanye amashishini abucala, kufuneka bacacise iintlobo zeeplastikhi eziveliswa lishishini xa kuthengwa i-pelletizer. Abenzi beeplletizer ngokubanzi banokurisayikilisha kuphela kwaye bavelise iiplastikhi zenjongo ngokubanzi esekwe kwi-PP kunye ne-PE, ekwanazo izinto eziqhelekileyo zeplastiki kwimarike yeplastikhi. Imakethi ye-foam yezinto ze-PS incinci. Ukuba kukho ishaneli yokuthengisa ecacileyo yeeplastikhi ezizodwa, abasebenzisi banakho nokuthenga i-pelletizers ehambelana nayo.
Ukusebenza kwegranulator. Ii-Granulators zingahlulwa-hlulwa zibe zii-granulators ezisisikrufu esinye kunye namawele e-screw-granulators ngokwenani lezikrufu. Xa i-single-screw granulator isebenza, iplastiki idluliselwa phambili kwi-spiral emgqonyeni. Xa i-granulator yamawele isebenza, iplastiki idluliselwa phambili kumgca othe ngqo emgqonyeni. Ngokomgaqo osebenzayo, xa umatshini wokujija amawele umisiwe, izinto ezikumatshini zinokukhutshwa ngokusisiseko, kwaye umatshini owodwa wokujija unokugcina inani elincinci lezinto ezishiyekileyo. Uninzi lweeplastikhi lunokufakwa iplletized, kwaye i-single-and twin-screw ingasetyenziswa ngaphandle kokwahlulahlula.
Nangona kunjalo, xa usenza iiplastikhi ezirisayikilishekiweyo, ngenxa yomphezulu omkhulu wesikhunta esiguqula isikrini kunye nokufaka ngokulula ngakumbi, umatshini osisikrikhi omnye usebenza ngakumbi Xa usenza iiplastiki eziguqulweyo, umbala we-masterbatches, kunye nokupompa umbala oxubeneyo, iziphumo zoomatshini babini ziyalingana. ; Xa usenza iglasi eyandisiweyo yefayibha kunye nezinto ezinqamlezileyo zekhebula yolwandle, zinokusetyenziswa kuphela ziigulufa zegranulators ezinokusetyenziswa. Ukongeza, ngokweendleko zokuthengwa koomatshini kunye neendleko zokuvelisa kamva, amathuba e-single-screw granulation asezantsi kakhulu, ngelixa i-twin-screw granulators isesichengeni. Ke ngoko, xa kuthengwa izixhobo, kufuneka ukhethe izixhobo ezihambelanayo ngokweemveliso ezahlukeneyo eziveliswe lishishini.